मनोनयनमा परेपछि के भने खेलाडीहरुले? | Hamro Khelkud
मनोनयनमा परेपछि के भने खेलाडीहरुले?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– एएफसी सोलिडारिटी कप २०१६को फाइनलमा नेपालका लागि विजयी गोल गरेका सुजल श्रेष्ठसहित विभिन्न ५ खेलका खेलाडी पल्सर स्पोर्टस अवार्ड २०७३ को पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् ।
२०७३ सालमा प्राप्त गरेको उपलब्धि र चर्चाको आधारमा पिपल्स च्वाइस अवार्डका लागि ५ खेलाडीको मनोनयन गरिएको आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले (एनएसजेएफ)ले जनाएको छ । मञ्चका सचिव राजु घिसिङको संयोजकत्वमा रहेको खेलाडी छनोट समितिले मनोनयन तय गरेको हो । यसका लागि एसएमएस भोटिङ र फेसबुक लाइक आजबाटै सुरु भएको मञ्चले जनाएको छ ।
मनोनयन सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ खेलाडीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
दिपेन्द्र सिंह ऐरी (क्रिकेट)
वर्ष भरिको खेलको मुल्याङ्कन गरिदिनु भएर स्पोर्टस् अवार्डको पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा छनोट गरिदिनु भएकोमा मञ्चलाई धन्यवाद । आफुलाई पनि मनोनयनमा पर्दा गौरवको अनुभुति भैरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले त खेलको मुल्याङ्कन गरेर पिपुल्स च्वाइस अवार्डको नोमिनेसनमा छनोट गरिदिनु भएकोमा एनएसजेएफलाई धन्यवाद । अब मलाई भोट र एसएमएस गरेर जिताउन अनुरोध गर्दछु ।
फुपूल्हामु खत्री (जुडो)
पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा पर्दा विश्वास नै गर्न सकिरहेको छैन । तै पनि एकदमै खुशी छु । खेलको मुल्याङ्कन गरेर अवार्डको मनोनयनमा छनोट गरिदिनु भएकोमा एनएसजेएफलाई धन्यवाद ।
एनएसजेएफलाई धन्यवाद । एकदमै खुशी लागेको छ । पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा परेका फुटबलका सुजल श्रेष्ठ भने प्रशिक्षण दौरान जापानमा रहेका कारण मनोनयन सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेनन् ।
राष्ट्रिय टोलीसँग जापान भ्रमणमा रहेका मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठले हाम्रो खेलकुद डट कमसँग बोल्दै आफ्नो भनाइ राखे।
म एनएसजेएफप्रति निकै आभारी छु। म निकै गौरवान्दित महासुस गरिरहेको छु। यसले मेरो मनोबल एकदम बढेको छ। मलाई पहिलो पटक सुन्दा एकदम आश्चर्य लाग्यो। देशको प्रतिनिधित्व गर्नु एउटा पाटो हो, तर सँगसँगै समर्थकहरुको माझ आफ्नो नाम बनाउनु उत्तिकै खुशीको कुरा हो।